Ụlọ ọrụ kacha mma Jumbo Popit Fidget Sensory Toy Autism Sensory Push Pop Toy Manufacturer and Factory |Weishun
Aha ngwaahịa Big Popit Fidget ụmụaka
Ihe onwunwe Ihe mkpuchi silicone
Ụdị Egwuregwu egwuri egwu mmụta na-atọ ọchị
• Jumbo & Gigant: Theịṅụ mmanya ihe egwuregwu ụmụakanwere nnukwu nha, 30 * 30cm, ma nwee 256 egosipụta iji pịa. Ya mere, ị nweghị ike iburu ya. Ma ị nwere ike igwu ya na-atọ ọchị karịa nke obere.
• Ọtụtụ ojiji: The junboihe egwuregwu ụmụaka popit fidgetọ bụghị naanị ihe egwuregwu ụmụaka na-atọ ọchị, kamakwa ọ nwere ike ịbụ ngwá ọrụ ezinụlọ. Ị nwere ike gbapụta egosipụta na ndị enyi gị, ezinụlọ gị, nwa klas gị, wdg.
• Na-adịgide adịgide & Dị Mfe Ọcha: Ejiri silicone ọkwa nri mee, Autism Sensory Push Pop Toy na-enwe mmetụta dị nro na ntụsara ahụ. Ọ dị elu ike mgbanwe na ọ dịghị mfe ibibi. Na mgbakwunye, enwere ike iji ya n'enweghị nsogbu na efere efere, dị mfe ihicha. elu.
Nke gara aga: Akpa Silicone Ọhụrụ bịarutere Pụrụ iche akpa Ubu Popit Fidget maka ụmụ nwanyị nwanyị
Osote: Ọkwa nri 15 Obere oghere Silicone Chocolate Molds Chocolate Molds ejiri aka mee
ihe egwuregwu ụmụaka popit fidget
2021 Hot ire Pop It Fidget Toy Pop Ọ n'etiti ...
2021 Kid Toy Fidget Toys Push Bubble Simple Sen ...
2021 Ngwongwo Nwa Toy Bubble Nchegbu Ihe ụmụaka ji egwuri egwu Hexag...
Ihe egwuregwu ụmụaka na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ ihe egwuregwu ụmụaka.
Ihe egwuregwu ụmụaka ji egwuri egwu tọọ Pop It Fidget Sens.